Umzekeliso ngobungane. Umzekeliso esifushane ubungani izingane
IzAga njalo uthande abantu. Bagcwala kunencazelo ejulile futhi usize abantu baqonde ukubaluleka kwezinto eziningi. Kungakhathaliseki ukuthi Lowo umzekeliso ngobungane noma umzekeliso mayelana nenjongo yokuphila, le into ebalulekile ukuthi lolu hlobo izindaba ahlushwe, wajabulela futhi kuyoba ziphoqa phakathi kwabantu ngenxa yezizathu eziningi.
Umfanekiso - indaba kancane ukuthi has a lot of umqondo. Ngempela, kuyafaneleka-ke ukuzwa ukuthi uma uqala ukucabanga mayelana eziningi izinto kwadingeka ayinandaba ikakhulukazi. Ngokuvamile, emzekelisweni zefilosofi, ukucabangela, ephoqa uzwisise imvelo okuthile elalibonakala yayilula kakhulu futhi esobala.
Umzekeliso ubungani - omunye amagatsha, lapho kukhona abaningi. Namkha kunjalo, njengawo ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi, kungaba ama-movie noma izincwadi. Abanye unesithakazelo emzekelisweni ubungani, nabanye - ngothando, eyesithathu - injongo yokuphila, owesine - ngenye into. Futhi isithakazelo sakhe, konke zabo ezinhle, kodwa sinesithakazelo kwesikwenzayo ukhetho lokuqala.
Ngokuvamile, umzekeliso ngobungane esifushane, njengoba Ziningi amazwi hhayi ukuze abonise le umfundi umyalezo othile, kodwa kancane kaningi, kodwa noma kunjalo zikhona izindaba esithuthuke kabanzana ukuthi bengayi ngisho kufanelekile ekhasini elilodwa. Yiqiniso, isidingo okukhulu phakathi kwabantu bewuthanda izingcezu kunalokho esifushane, ngoba abanye ungathandi ukufunda okuningi (okuyinto nakanjani lokhu kuyadabukisa, kodwa akusiwona ngalokhu), kanti abanye abanalo isikhathi ukuchitha ke cishe asetshenziselwe ize nje, ngakho emfanekisweni iDemo uyohlale ubungani ngobuningi abahlonishwayo, kuka voluminous. Kodwa konke lokhu kubalulekile futhi kuyadingeka.
Ubungane ezimpilweni zethu
Ngokuvamile umuntu nabathandekayo. Futhi iningi lazo akuzona empeleni ngubani, okungukuthi, abangane, ngoba bayakwazi ukusekela umuntu ngomzuzwana nzima, bajabula kanye nabo ethembeni izikhathi ujabule ulalele konke.
IzAga ngobungane abangane zinhle ngoba sikwazi ukuqondisisa abantu ababalulekile kanjani izimpilo zabantu, indima ezinkulukazi badlala. Kwenzeka ukuthi asikwazi ukuba yedwa ukuze. Kungakhathaliseki abantu bangase bathi, kungakhathaliseki wazama kanjani yona nabanye aluthandayo ukuba yedwa ukukholisa, futhi akekho iyalidinga, konke umbhedo, afuna ukufihla ngemuva ngomzamo babonakale benamandla angaphezu kuka ngempela. ibalula Yiqiniso, okuyinto bayakwazi ngisho nokuphila konke ukuchitha yedwa wena uthole kude khona okunjalo iyunithi ubumnandi.
Baphikisana manjalo inkosi isikhulu. Wanquma okuziphindiselela umngane womshado kuqala, ukumphatha kabi. Ukumkani wababiza ke wesahlulelo futhi yayala ukuba ibulale unkosikazi wakhe ubone ukuthi ukukhala kokwesikhulu. indoda Ezagcwaliseka "isicelo" sasebukhosini, waquma ikhanda lowesifazana. Cried kokwesikhulu. Inkosi, ngaphandle kokucabanga kabili, futhi wayala ukuba izingane ezincane ukuthi ziyobulala. Cried kokwesikhulu. Inkosi e injabulo engena, ngakho ngeke ayeke; izinyembezi kabuhlungu abanye wayefuna ukubona, ngakho izisulu olandelayo we wesahlulelo baba abazali. Cried kokwesikhulu. Wahlala nomndeni wakhe kuphela umngane, inkosi futhi yayala ukubulawa njengoba kwenza bonke abanye. Lapha isikhulu wakhala, kodwa ngakho kuyadabukisa ukuthi wesahlulelo okuningi ngendlela enesihluku futhi nabangenaluthando wakhala kanye naye.
- Kungani, ngemva kokufa abazali, izingane nomkakhe izinyembezi anikaze nithi - wabuza inkosi bamangale kamuva lolu hlaza isikhulu - futhi ngemva kokufa umngane kabi?
- Abazali nokuncane amadala - ahlangana isikhulu, - ngakho ngokushesha futhi ngabe washona. Thola umfazi omusha akunzima, kangakanani uzale izingane, futhi ngizokulwa. Kodwa abanye bathole - oh yeka ukuthi kunzima. Kwaphela iminyaka eminingi, kubalulekile ukuthi uchithe ukuthola yangempela, umngane weqiniso. Ngakho-ke, mina walilela kuye kuphela.
Lo mzekeliso wakhe, nokuthi uthi konke. Yebo, lokho akusho ukubonisa kwaba indlela indoda eyabulawa, kodwa okungenani yokuthi ukufa kwakhe kuphela alila Prince, likwenza kucace ukuthi umuntu kwakukuhle ngempela. Wonke umuntu kumele atholakala ukuphila komuntu ababengabizwa ngokuthi eduze.
Inja - umngane yabantu emihle
Le nkulumo ibizwa kuwo wonke umuntu ezaziwayo. Nokho, akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi kukhona omunye umfanekiso, ngokuletha lisho okufanayo umfundi. Ngempela, inja kusukela kudala wacabangela ungumngane oqotho kakhulu, okungenani uma uliqhathanisa nabazalwane ikati uyaziqhenya, isibonelo. Cha, akusho ukuthi yokugcina kubi, njalo isilwane yayo elihle. Noma kunjalo, nangu ngomfanekiso ubungane phakathi komuntu inja.
Umngane weqiniso - inja
Waphila njengokungathi isidakwa endlini. Wayenamadodana isilwane ezimbili: ikati kodwa inja. Wakamuva njalo ukuqagulisana bodwa ngokuthi ngubani phakathi kwazo weqiniso umngane esiyingcweti, futhi ngamunye wazama ukhiphe ingubo phezu kwakhe.
Uma sesithole uphelelwa imali izidakwa, futhi efuna ukulibulala baphuze intolerably. ngokushesha Ikati wagxuma kumnikazi bathi, bathi: "Thengisa kimi, uthole imali, ukuthenga isiphuzo, futhi ngithanda umngani wakho omkhulu abaleke ikhasimende, nami kini."
cat Drunk ithengiswe, wathenga isiphuzo, wabuyela ekhaya ukumpompa yena ngotshwala, futhi lapho ebonana inja. Futhi hhayi ngandlela-thile wahlangana futhi sebekhathele ukukhonkotha kwazo, kusukela lapho umuntu ewelwa ibhodlela uphahlaze ke, ethela olunamandla. Ethukuthele kuze kube phakade odakiwe, ushaya inja, waze akazange azame ukubaleka futhi zange ajamelane nhlobo, nje babelokhu bethi:
- Bey, umnikazi, ukushaya, nje ungaphuzi.
Ngalesi sikhathi kwafika ikati. Wabuka ngokuzidla lenja ngakho yena elibizwa futhi ukusingatha kuya asempumalanga, ukuphinda zokukhwabanisa odlule. Ngokushesha le esiphuza emuva nebhodlela entsha. Futhi eyivula utshwala wayemthanda kanjani waphinda wamvimbela ukuba inja. Ngakho Labhavumula futhi esebhavumula ukuthi umkhumbi utshwala yezimo abhekene baphuma ngesinyenyela izandla okwesibili. Umuntu onolaka kunanini ngaphambili, ne amandla amasha yamshaya inja ethi ngakho: "Ngizokubulala"
- Kill, master, - ngokuthobeka uthi isilwane - ukubulala, nje ungaphuzi!
Ngokushesha kwafika uquqaba ukuba isidakwa, kwenzenjani. Wayeqaphela ngubani umngane, khona-ke ngempela. Waqala ukuba axolise inja, kuwukuziphulula yebo yakhe yamanga. A cat ukuthi wazibonakalisa ngokushesha, umuntu ithengiswe futhi, nakuba ngalesi sikhathi, kuze kube manje, ukuthi iyikhaya umgwaqo ayitholakali.
Iphuzu eliyinhloko ukuthi inja akafunanga usokhaya konakalisa impilo yakho, ngoba akukho ukahle azinakugcinwa. Ikati, esikhundleni salokho, wafuna kuphela ukubonisa umnikazi ukuthi muhle, bathi, emsiza. Le ndoda yayazi ke. Uma kungenjalo ngokushesha, kodwa namanje ngabona.
Uthando ubungani eduze kuka kungase kubonakale efika kuqala kusondzela kakhulu. Ngokuvamile kwenzeka, njengoba ezimbili wobulili obuhlukile ekuqaleni aqukethe ngokuya friendly, bese ningena ezahlukene, uxhumano okungokomoya okwengeziwe. Yikuphi okuhle, ngoba ngaphambi ukuthi laba bantu bakwazile ziyaphuma ubuhlobo nabathile: bayazi nomunye, bazi Ukuthanda izinto zika nengxenye yayo yesibili, uyazi ukuthi yena uthanda. Yingakho yimuphi umfanekiso ngalokhu zobungane nothando kufanele ukwenze kucace ukuthi abantu ukuthi kubaluleke lezi ubudlelwano, naseduze kanjani ukuthi akuphi, uma kuziwa abantu ababili. Yiqiniso, embi ngalo wukuthi uthando ingaphezu lezivakashi, ubungane - ubungane bangempela - kuze kube phakade.
Izindaba izidingo ezahlukene, izindaba ezahlukene ibalulekile. Emfanekisweni ewusizo Ikakhulukazi zobungane izingane, ngenxa yobudala yabo ukwakheka ubuntu. Lokhu kusho ukuthi izingane zikhula kwafana intando ukufundisa, hhayi kuphela abazali nothisha, kodwa futhi izincwadi, izindaba, amabhayisikobho, ukusakazwa, futhi kweminye imithombo yokwaziswa. Emfanekisweni Wezingane ngobungane ngokuvamile zinhle kakhulu futhi kulula ukuthi asho ukuthini yayisobala ngisho ingane. Nokho, uma indaba Akucaci, mhlawumbe umntwana uyofuna baqonde umyalezo ngeNkosi uJesu, okuyinto futhi muhle, kulesi simo kungaba sikhule nelukuluku futhi ohlakaniphile ingane ngoba.
Ngaphezu kwalokho, izingane - abangane abaqotho kakhulu. Ngemva umuntu ekhula, ngezinye izikhathi anakho ukumamatheka futhi 'sizakhele ubungane' nabantu abalungile, isibonelo, emsebenzini. Lokhu kubizwa ngokuthi yi ubuzenzisi, yini ukufihla, kodwa iqiniso liwukuthi: izingane, izingane ezincane ukuzikhohlisa abangafuni obakhathalelayo isimo sezenhlalo ontanga yabo (okungenani okwamanje), uthando (buyinqqikithi friendly) nomunye ngobuqotho, ngobuqotho . Lona inzuzo yabo eyinhloko. Ngeshwa, hhayi wonke umuntu okwenzayo ukuze ugcine le ucezu ukuthembeka endabeni inhliziyo.
Noma yimuphi umfanekiso ngalokhu ubungani lithwala umqondo abanye abantu kubaluleke kangakanani ekuphileni kwethu. Abantu ngokushesha akuqonde lokhu, ngokushesha uzokufumana yena umngane wangempela. Futhi-ke kangcono esemncane, ukunikeza phisa ubungane, ngoba yena, njengabo iwayini, luyaqina kuphela unyaka ngamunye kuba "okumnandi."
Troyekurov ukuthi wanika eziningi isisindo ezifundazweni? A. Roman S. Pushkina "Dubrovsky".
Izincwadi Vadima Zelanda. umfundi Izibuyekezo
Iziphi izici Derzhavina ubuciko sibonakala ngokwanda 'nokuvuma ". I iziphakamiso main
Rabelais 'Gargantua futhi Pantagruel. " Isifingqo inoveli
Nikolai Gogol: izincwadi, emfushane okudala
Njengoba kukhibhodi ukubeka inhliziyo - izindlela ezintathu eziyisisekelo
Ngena ngemvume ku-Usuku lokuzalwa: noma bangakholelwa kuNkulunkulu?
Ukwandisa womgwaqo, ukusungulwa Blog
Upharafini okugeza ngoba izandla ekhaya
Indaba ethinta inhliziyo, ebhalwe ngu-Andrei Platonov. Isifingqo: "Inkomo" - umsebenzi oqondene nabantu nezilwane
Mkhathi "Enterprise": incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Kungani singekho umsindo phezu laptop? izimbangela
Umlingisi Italian Dzhuliano Dzhemma (Giuliano Gemma): Biography, lokusungula